Duqii hore ee New York Michael Bloomberg oo ku biiray tartanka loogu soo baxayo… – Hagaag.com
Duqii hore ee New York Michael Bloomberg oo ku biiray tartanka loogu soo baxayo…
Duqii hore ee New York Michael Bloomberg ayaa u gudbiyay musharraxnimadiisa is reeb reebka tartanka xisbiga Dimuqraadiga ee Gobolka Alabama ka hor waqtiga kama dambaysta ah, isagoo soo jeedinaya muhiimada ay leedahay u tartamida madaxweynaha Mareykanka.
Bloomberg wuxuu ka mid yahay musharixiinta Dimuqraadiga ah ee u soo baxay bilowga 3-da March ee gobolka koonfureed, sida Xisbiga Dimuqraadiga ee Gobolaka Alabama ku sheegay boggiisa.
Waxaa xusid mudan in Alabama ay leedahay waqti kama dambeys ah oo loogu talagalay musharrixiinta inay soo gudbiyaan waraaqaha si ay ugu qalmaan is reeb reebka tartanka xisbiga.
Horraantii sannadkan ayaa Bloomberg wuxuu sheegay in uusan u tartami doonin doorashada madaxtinimada Mareykanka, laakiin wuxuu albaabka u furay fursadaha ay ugu tartami karaan, sidaasi waxaa lagu yiri bayaan uu soo dhigay bartiisa Twitter-ka lataliyihiisa dhanka siyaasada.
Kadib markii soo ifbaxay warkan ayaa warbixinada wararka ay sheegeen in Bloomberg uu qorsheyneyo inuu gaaro waqtiga kama dambaysta ah ee Gobolka Alabama isla markaana uu u soo gudbiyo waraaqihiisa musharaxnimada kahor taariikhdaas.
Waxaa hadda la xaqiijiyay in magaca Bloomberg uu ka soo muuqan doono waraaqaha codbixinta is reebreebka ee Alabama sanadka soo socda.
Trump ayaa wuxuu ku jees jeesay Bloomberg jimcihii wuxuuna yiri “malaha soo jiidasho oo natiijo fiican uu ku gaaro”.
“Waan garanayaa Michael, waxba maahan,” ayuu Trump u sheegay suxufiyiinta bannaanka Aqalka Cad.
Wuxuu rumeysan yahay in ololaha Bloomberg uu waxyeello u geysan doono madaxweyne ku xigeenkii hore Joe Biden, oo ah musharaxa ugu rajada wanaagsan inuu u soo baxo magacaabista dimoqraadiga.
Bloomberg, ayaa ah ninka sagaalaad ee ugu taajirsan Mareykanka sida ay qortay majaladda Forbes, wuxuu bishii Maarso sheegay inuusan u tartami doonin xilka madaxweynaha. Laakiin wuxuu markaa cadeeyay inuu u adeegsan doono ilihiisa dhaqaalaha si uu u taageero musharrixiinta iyo arrimaha quseeya isaga, oo ay ku jiraan la dagaalanka isbedelka cimilada.